Google dia nanala fampiharana 85 avy amin'ny Play Store izay nangalatra tenimiafina | Androidsis
Nesorina ireo fampiharana 85 izay nangalatra tenimiafina tao amin'ny Play Store
Eder Ferreño | | fiarovana, Tutorials
Google dia niezaka nanatsara ny fiarovana ny mpampiasa Android hatry ny ela. Matetika izy ireo no niditra an-tsokosoko fampiharana maloto ao amin'ny Play Store, mametraka loza amin'ireo mpampiasa rafitra miasa an-tapitrisany. Ny fahatongavan'ireo fitaovana toa Google Play Protect nanome fanantenana. Saingy, ny valiny dia mbola tsy tsara araka ny tokony ho izy.
Ny fampiharana maloto dia mipoitra hatrany ao amin'ny fivarotana fampiharana malaza. Raha ny tena izy, Noterena i Google hanala rindranasa 85 tao amin'ny Play Store satria nangalatra ny teny miafin'ny mpampiasa izy ireo. Ahoana ny fomba nidiran'ireo rindranasa ireo tao amin'ilay magazay?
Ny zavatra mampiahiahy indrindra dia izany ny ankamaroan'ireo rindranasa ireo dia nalaza be. Andriamatoa filoha Trump, kopian'ny lalao momba ny filohan'i Etazonia no malaza indrindra amin'ireto fampiharana ratsy ireto. Nihoatra ny iray tapitrisa ny fampidinana azy. Raha maro amin'ireo fampiharana 84 hafa nihoatra ny 100.000 ny fampidinana tao amin'ny Google Play.
Google dia efa nanamafy fa ny fampiharana 85 rehetra dia nesorina tao amin'ny Play Store. Ka afaka matoky ireo mpampiasa. Na dia io olana vaovao io aza dia manambara indray ireo olan'ny fiarovana maro izay misy amin'ny Android ankehitriny. Amin'izay mba Google dia mila miasa mafy hanome azy ireo vahaolana.
Manantena ny fanatsarana ny fiarovana hatrany izahay, hiarovana ireo mpampiasa Android. Raha misy aminareo misintona an'Andriamatoa Filoham-pirenena Trump, ilay hany fampiharana efa naseho ny anarany, dia tsara kokoa ny mamafa azy amin'ny telefaoninao. Ahoana ny hevitrao momba ity lesoka vaovao ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Nesorina ireo fampiharana 85 izay nangalatra tenimiafina tao amin'ny Play Store
Fernando Perez dia hoy izy:
Tokony homenao ny lisitry ny rindranasa ireo hahafahanao mamafa azy ireo raha apetrakao izy ireo
Valiny tamin'i Fernando Perez
Eder Ferreño dia hoy izy:
Tsy naseho ny anaran'ireo fangatahana ireo, Andriamatoa Filoha Trump ihany, ka izany rehetra izany ny fampahalalana azo hatreto.
Valiny tamin'i Eder Ferreño
Daniel borrelli dia hoy izy:
Mahamenatra izay mitranga amin'ireo fampiharana, inona no fehezin'izy ireo, hoy aho? Na iza na iza manao app dia tsy misy manome baolina azy, efa nanana olana tamin'ny roa aho ary nilaza izy ireo fa milamina ny play store? Apetraho ny bateria ary ataovy indray mandeha ny fanaraha-maso mifandraika !! Misaotra !!!!!!!
Valiny tamin'i Daniel Borrelli
Meiigoo S8 Fanomezana Iraisampirenena Manome !!
Ny Essential Phone dia nahavita nivarotra singa 50.000 XNUMX